Ellicott Dredges Policy Policy
Ellicott Dredges waxaa ka go'an ilaalinta macluumaadka kaas oo cadeeya oo la xiriira adiga ama shakhsiyaadka kale (macluumaadka shaqsiga ah) iyo u hoggaansanaanta sharciyada ilaalinta macluumaadka. Qaanuunka Arrimaha Khaaska ah wuxuu quseeyaa websaydhyada soo socda: dredge.com, imsdredge.com, mudcatdredge.com, iyo rohridrecodredge.com.
Nidaamkan asturnaanta wuxuu qeexayaa uruurinta macluumaadka Shirkadda iyo ku-dhaqanka wadaagga ku saabsan adeegsiga macluumaadkaaga shaqsiyeed ee la xiriira macaamiisha, macaamiisha, alaab-qeybiyeyaasha, iibiyeyaasha, la-taliyayaasha, iyo bixiyeyaasha adeegga (adiga) ee aan soo aruurino oo aan ugu adeegsanno ganacsigeenna. Intaas waxaa sii dheer, siyaasadda asturnaanta ayaa sidoo kale dabooleysa wixii macluumaad shakhsi ah ee laga soo ururiyey isticmaalkaaga boggayaga internetka (Site).
Goobtayada waxaa ku jiri kara xiriiriyeyaal boggag kale oo dhinac saddexaad ah. Haddii aad raacdo xiriiriyaha mid ka mid ah boggagaas saddexaad, fadlan la soco inay leeyihiin siyaasadohooda asturnaanta iyo innaannaan aqbalin mas'uuliyad ama mas'uuliyad ka sareysa siyaasadooda ama socodsiinta macluumaadkaaga shakhsiyeed.
1. Macluumaadka aan kaa ururin karno adiga kugu saabsan
Waxaan ururin karnaa oo aan socodsiin karnaa macluumaadka soo socda ee adiga kugu saabsan:
macluumaadka aad bixiso adigoo buuxinaya foomam ama noo soo diraya;
haddii aad nala soo xiriirto, waxaan hayn karnaa diiwaangelinta xiriirkaas, farriinta codka ama faahfaahinta wixii wadahadal ah ee aan kula yeelan karno;
faahfaahinta booqashooyinkaaga boggayaga internetka iyo macluumaadka lagu soo ururiyey iyada oo loo marayo cookies iyo tiknoolajiyada kale ee raadraaca oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn, cinwaankaaga IP iyo magacaaga, nooca biraawsarkaaga iyo nidaamka hawlgalka, xogta taraafikada, xogta goobta, baloogyada internetka iyo macluumaadka kale ee isgaarsiinta, iyo ilaha aad ka heli karto;
tafaasiisha macaamillada aad ku sameyso Boggeena, ay ku jiraan wixii xigasho ah ee aad heshay; iyo
macluumaadka laga heli karo ilaha guud ee la heli karo oo ay ku jiraan baraha warbaahinta bulshada.
2. Sababta aan u aruurineyno macluumaadkaaga adiga kugu saabsan
Waxaan u maarayn karnaa macluumaadka shakhsiyeed ujeedooyin qaanuun ama sharci ah qaar ama dhammaan siyaabaha soo socda:
si kor loogu qaado amniga shabakadaheena iyo nidaamyada macluumaadka;
in la garto lagana hortago khayaanada;
si loo ilaaliyo xisaabaadkeena iyo diiwaannadayada;
si wax looga beddelo, loo habeeyo ama haddii kale loo horumariyo adeegyadeena / isgaarsiinteena;
u hoggaansanaanta sharciga shisheeye, xoojinta sharciga, maxkamadda iyo shuruudaha hayadaha sharciyeynta;
u hoggaansanaanta waajibaadka sharci;
si loo ilaaliyo danahaaga muhiimka ah ama danaha qof kale;
inay soo aruuriyaan sirdoonka suuqa, la xiriiraan oo ay ugu deeqaan shakhsiyaadka;
tababar iyo ujeedooyin tayo leh;
marka la fuliyo heshiiska aad adiga la leedahay ama aad qaaddo tallaabooyin aad ku gasho qandaraas; iyo
in la qabto hawl loo qabtay danta guud ama la adeegsiga hay'ad rasmi ah.
3. Sida aan u adeegsan karno macluumaadkaaga shakhsiyeed
Waxaan u isticmaali karnaa macluumaadkaaga qaaska siyaabo soosocda:
inaad go'aanno ka gaadho haddii aad ganacsi la leedahay;
si loola socdo wicitaanada iyo macaamil ganacsi si loo hubiyo tayada adeegga, u hoggaansanaanta qawaaniinta, si loola dagaallamo khayaanada loona hubiyo u hoggaansanaanta USA / UK / EU iyo cunaqabateynta caalamiga ah;
in lagu aqoonsado iyo in la sameeyo wixii hubin ah ee aqoonsiga ah sida uu farayo qaanuunka lagu dabaqi karo iyo waxqabadka ugu wanaagsan waqti kasta;
si loo soo celiyo wixii lacag bixin ah ee inaga jirta awgeed iyo halka ay lagama maarmaanka u tahay in lagu dhaqan geliyo soo kabashada noocan ah iyada oo la adeegsanayo hay'adaha hay'adaha aruurinta deynta ama qaadista tallaabo kale oo sharci ah;
si loo falanqeeyo si loo fahmo adeegga aan bixinno iyo inaan horumarinno ganacsigeenna;
si loo maareeyo kaabayaashayada, hawlgallada ganacsiga oo aan u hoggaansanno siyaasadaha gudaha iyo nidaamyada;
inaan kugu wargaliyo isbedelada ku yimaada howlaheena; iyo
adeegyada suuqgeynta adiga kuugu soo dir boostada, emaylka, SMS, telefon, iyo fakis.
Kama shaqeyn doonno xogtaada halkaas oo danahooyinkaas ay ka leexinayaan danahaaga.
Oggolaanshahaaga ku saabsan ka baaraandegida macluumaadkaaga shakhsiyeed ulajeeddooyin gaar ah ayaa laga yaabaa inay lagama maarmaan noqoto in la raaco shuruucda ilaalinta macluumaadka ee lagu dabaqi karo; iyo halka ay tani ka taagan tahay, waxaan ku weydiisan doonaa ogolaanshahaaga iyadoo la raacayo shuruucdaas.
Waad ka noqon kartaa ogolaanshahaaga hawshaas wakhti kasta.
5. Wadaagista macluumaadkaaga shakhsiyeed
Shirkadda waxaa suuragal ah inay ku siiso macluumaad shakhsiyeed mid diyaar u ah:
Waxaan leenahay shirkado kooxeed adduunka oo dhan, gudaha iyo dibedda Yurub (tusaale ahaan, gudaha Mareykanka), Waxaan la wadaagi karnaa xogtaada shakhsiga ah shirkadahayada kooxda, laakiin kaliya ujeedooyinka lagu qeexay siyaasaddan asturnaanta oo aan weli mas'uul ka nahay maaraynta iyo amniga macluumaadka shakhsiyeed. Helitaanka macluumaadka shakhsi ahaaneed ee ka dhex jira Shirkadda iyo shirkadeena kooxeed ayaa ku xaddidan shaqsiyaadka u baahan inay helaan macluumaadka ganacsigeenna.
Dhinacyada kale saddexaad
Waxaan sidoo kale u oggolaan karnaa dhinacyada saddexaad ee la xushay oo ay ku jiraan alaab-qeybiyeyaasha, bixiyeyaasha adeegga, hay'adaha maaliyadeed inay helaan macluumaadkaaga shakhsiyeed ujeeddooyinka kor lagu sheegay. Dhammaan isweydaarsiga noocaas ah waxaa lagu sameyn doonaa si waafaqsan sharciyada khuseeya. Haddii macluumaad khaldan la bixiyo iyo / ama khayaano la aqoonsado ama laga shakiyo, faahfaahinta waxaa loo gudbin karaa kahortagga musuqmaasuqa iyo hay'adaha kahortaga lacagta la dhaqay, hay'adaha sharci fulinta ama caymisyada kale waana diiwaan gelin karnaa annaga ama iyaga. Anaga iyo ururada kaleba waxaa laga yaabaa inaan sidoo kale helno oo aan u isticmaalno macluumaadkan si aan uga hortagno khayaanada iyo dambiyada kale;
Annaga iyo hay'adaha kale ee marin u heli kara oo adeegsan kara macluumaadka ay qoreen hay'adaha ka hortagga khayaanada ayaa laga yaabaa inaan ka qabanno dalal kale oo ay ka mid yihiin ka baxsan EEA.
Mas'uuliyiinta dowladda iyo dhinac saddexaad ayaa ku lug lahaa ficil maxkamadeed
Waxaan u siidayn karnaa macluumaadkaaga shakhsiyeed dhinacyada saddexaad, maxkamadaha iyo sharciyeynta ama wakaaladaha fulinta sharciga ee laxiriira weydiimaha, talaabooyinka ama baaritaanada qeybahaas oo kale ah meelkasta oo aduunka ka mid ah ama si aan awood ugu siino Shirkadda inay u hogaansanto shuruudaheeda sharci ama wada hadal lala yeelato maamulayaasha sida lagu dabaqi karo.
6. Gudbinta, kaydinta, iyo amniga macluumaadkaaga shakhsiyeed
Nasiib darrose, ma jiro gudbinta xogta internetka ama websaydh kasta oo dammaanad qaadi kara inuu ka nabadgeli karo faragalinta. Si kastaba ha noqotee, waxaan ilaalinaynaa ganacsi macquul ah oo macquul ah, elektiroonig ah iyo ilaalin qaabsocod leh si aan u ilaalino macluumaadkaaga qaaska ah iyadoo la raacayo qawaaniinta ilaalinta macluumaadka ee la adeegsan karo.
Dhamaan macluumaadka kujira xakamayntayada ayaa lagu keydiyaa adeegayaasheena aaminka ah, nuqul aamin adag ama qaab dhismeedka daruur aamin ah iyo marin u helis iyo isticmaal ku saleysan siyaasadaheena amniga iyo heerarka.
Halka ay Shirkadda u siidaynayso xogtaada shaqsi dhinac saddexaad, waxaan uga baahannahay qaybta saddexaad inay lahaadaan tillaabooyin farsamo iyo abaabul oo ku habboon si loo ilaaliyo xogtaada.
Macluumaadkaaga shakhsiyeed waxaa marin u heli kara shaqaale ama cid saddexaad oo la oggolaaday iyo, in loo wareejiyo, loona wareejiyaa, iyo / ama lagu kaydiyaa, meel ka baxsan Aagga Dhaqaalaha Yurub (EEA) halkaas oo sharciyada ilaalinta xogta laga yaabo inay ka hooseyso heer ka hooseeya kan EEA.
7. Joojinta macluumaadkaaga shakhsiyeed
Waan hayn doonnaa macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed illaa iyo inta macquul ah ee loogu baahan yahay ujeeddooyinka ku xusan siyaasaddan qarsoodiga ah. Tan macnaheedu waxay tahay in aan haynno macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed waqti halkaas, tusaale ahaan, waxaa jiri kara suurtagal in loo baahdo in lagu hoggaansamo diiwaangelinta, canshuurta, xisaabinta, sharciyeynta ama shuruudaha sharciga ah.
Meesha aan macluumaadkaaga shakhsiyadeed mar dambe loogu baahnayn, waxaan hubin doonnaa in si sugan loo tirtiro.
Shuruucda ilaalinta macluumaadka waxay ku siinayaan xuquuqo la xiriira macluumaadka shaqsiyeed ee aan kaa hayno, kaas oo laga yaabo inay kujirto xaq inaad nooga baahan tahay:
ku siin doonaa faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sida aan u isticmaalno macluumaadkaaga shakhsiyeed;
ku siin doonaa koobiga macluumaadka shakhsiyeed ee aannu kaa hayno;
cusboonaysiiso wixii khaladaad ah ee macluumaadka shaqsiyeed ee aannu kaa hayno;
tirtiraan mid kasta oo ka mid ah macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ee aanan hadda haysanin sabab sharci ah oo loo adeegsado;
halkaasoo nidaamku ku saleysan yahay oggolaanshaha, jooji howshaas gaarka ah adiga oo la noqda oggolaanshahaaga;
diidi karaa hawl kasta oo ku saleysan danahayaga sharciga ah illaa iyo sababaha aan u fulineyno socodsiintaas ay uga culus yihiin wixii nacayb ku ah xuquuqdaada xogta ilaalinta;
xaddid sida aan u isticmaalno macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed inta cabashada la baarayo; iyo
u gudbi macluumaadkaaga shakhsiyadeed dhinac saddexaad qaab mashiinka aqriska lagu akhrin karo.
Duruufaha qaarkood, waxaan u baahanahay inaan xakameyno xuquuqahaaga si aan u ilaalino danaha guud (tusaale ahaan, ka hortagga ama ogaanshaha dembiga) iyo danahayaga (tusaale, dayactirka mudnaanta sharciga ah).
9. Nala soo xiriir
Waxaad nagala soo xiriiri kartaa arrimaha ku saabsan arrimaha asturnaanta adigoo:
e-mayl u diraya clewis@dredge.com or
iyada oo loo qorayo Ellicott Dredges, 1611 Bush Street, Baltimore, Maryland 21230.
10. Isbedelada lagu sameeyo siyaasadaheena gaarka ah
Waan beddeli karnaa waxyaabaha ku jira degelkeenna ama adeegyadeena ogeysiis la'aan, sidaas darteedna, siyaasadeena asturnaanta ayaa is beddeli karta wakhti kasta mustaqbalka. Waxaan, haddaba, kugu dhiirigalinaynaa inaad dib-u-eegis ku sameyso waqti ka waqti si aad uga warqabto sida aan u isticmaaleyno macluumaadka shakhsiyeed.
11. Xaqa aad u leedahay inaad ka cawdo
Haddii aadan ku qanacsanayn adeegsiga macluumaadkaaga shakhsi ahaaneed ama jawaabtayada aan ka bixinno codsi kasta oo aad codsato inaad ku dhaqanto xuquuqdaada ilaalinta xogta, ama haddii aad u malaynayso inaan jebinnay sharci kasta oo khuseeya ilaalinta xogta, markaa waxaad xaq u leedahay inaad uga dacwooto hay'ad kormeerta ka shaqeynta macluumaadkaaga shakhsiyeed. Haddii aadan hubin hay'adda kormeerta ka shaqeynta macluumaadkaaga shakhsiyeed, markaa fadlan nala soo xiriir si aad u hesho hagitaan dheeraad ah.